गैडा टाईम्स : पशु अधिकार र मानव चरित्रको चित्र हो – Purba Nepal
गैडा टाईम्स : पशु अधिकार र मानव चरित्रको चित्र हो
झापाको दमकमा प्रकाश आङ्गदेम्वेले इन्टिमेन्ट मार्फत नाटक देखाउने कामको थालनी गरेका थिए । आङ्गदाम्वेले दमकमा सञ्चालन गरेको गन्तब्य थिएटरले नाटक पर्दा तानेर मात्र देखाईन्छ त्यो पनि निशुल्क मात्र देखाईन्छ भन्ने प्रथालाई बिकास गर्दै नाटकमा नयाँ प्रस्तुती दिन थाले । त्यहि गन्तब्य थिएटरबाट कयौ यूवाहरु नाट्य क्षेत्रमा लागेका छन् । नाटक लेख्ने, अभियन गर्ने , नाटकको परिकल्पना गर्ने , निर्देशन गर्ने जस्ता जनशक्ति तयार भयो । त्यहि बेला उत्पादन भएको जनशक्ती अहिले काठमाडौ , बिराटनगर तथा अन्य बिभिन्न क्षेत्रमा नाटकको बिकास गर्ने काममा तल्लिन भएर लागेका छन् । तीनै मद्येका एक हुन दमकका सिजन दाहाल । उनीपनि गन्तब्य थिएटरका उत्पादन । गन्तब्य थिएटरमा हुने बिभिन्न नाटकमा सामान्य अभिनय गर्ने कामबाट नाट्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेका दाहाल अहिले नाटकको परिकल्पना तथा निर्देककका रुपमा परिचित बन्न थालेका छन् ।
करिव १० वर्ष अघि बिराटनगरमा मञ्चन भएको नाटक अन्धाको हात्ती हेर्न उनी दमकबाट बिराटनगर पुगेका थिए । बिराटनगरको गुरुकुल नाटकघरमा पुगेर पहिलो पटक टिकट काटेर इन्टिमेन्ट सहितको नाटक उनले हेरेका थिए ।
त्यसैको प्रेरणाले उनलाई आज स्थापीत नाटक निर्देशनका रुपमा परिचय बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले पछिल्ले पटक निर्देशन गरेको नाटक गैडा टाइम्स दमकमा आगामी माग १० गते देखी १४ गते सम्म प्रदर्शनमा आउँदै छ । करिव ६ वर्ष अघि पत्रिकमा छापीएको यो कथा अव नाटकमा रुपान्तरण हुने भएको हो । नाटक लेखन तथा निर्देशनमा ब्यस्त दमकका नाटककार सिजन अहिले अर्को नाटक लिएर दमक आएका छन् । उनले दमकलाई यस भन्दा अघि पनि नाटक मरिचेको चुप्पी दिएर काठमाडौ गएका थिए । उनको निर्देशनमा तयार भएको नाटक मरिचेको चुप्पी दमकमा अपार सफलता र दर्शकहरुको अथाह माया पाएर हौसीएकै कारण दमकमा अर्को नाटक लिएर आएको उनले बताए । उनीसँग नाटक लेख्ने र निर्देशन गर्ने दुवै क्षमता भएका कारण पनि उनी नाटक क्षेत्रका चम्किला तारा बनिरहेका छन् । दमकबासीलाई नाटक हेर्न टिकट काट्नु पर्छ भन्ने बानीको बिकास गराउन पनि दमकमा निरन्तर नाटक देखाउन थालीएको उनको भनाई छ। दमकमा आएर कसैले नाटक देखाउन खोज्दा थिएटर समेत छैन त्यसैले यो नाटक दमकमा एउटा छुट्टै थिएटर निर्माणको सहयोगार्थका लागि पनि हो । उनले भने ।
कसैले लेखेको कथालाई नाटकमा रुपान्तरण गर्नु सबै भन्दा ठुलो चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । शब्दलाई चित्रमा बदल्न सक्नु नै हाम्रोलाई मवत्पूर्ण काम हो । कथा पढ्दा पाईने आनन्द नाटक हेर्दा कमै मात्र पाईन्छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनी ‘शब्दलाई जस्ताको तस्तै चित्रमा बदल्नु चानचुने कुरा हैन कथा पढ्दा गरिएको कल्पना नाटकमा पाउन नसक्नु स्वभाविभ हो । कल्पना फरक फरक हुन सक्छ तर हामी कथाको सार र त्यसले दिन खोजेको सन्देशमा चाहि समान दिन सक्छौ ’ ।
करिव एक वर्ष उनले बुद्धिसागरको कथा पत्रिकामा पढेका थिए । कथा पढेपछि उनलाई मन पर्यो । यो कथालाई दृश्यमा रुपान्तरण गरि पाठकलाई दर्शक बनाउन सके कति रमाईलो हुन्थ्यो होला भन्ने उनको मनमा जाग्यो र उनले कथा गैडा टाइम्सलाई नाटकमा रुपान्तरण गर्ने पक्का गरे । र सुरु गरे कथालाई नाटक बनाउन । त्यसैका लागि उनी दमकमा छन् । दमकको रेडक्रसको हलमा करिव २० जनाकोक समुह सहित उनी दमकमा नाटकको पूर्व तयारी गराईरहेका छन् ।
कथा गैडा टाइम्सले पशु अधिकारको कुरालाई मात्र हैन मानवको प्रवृद्धिलाई पनि कडा ब्याङ्गय गरेकोले कथालाई नाटकमा रुपान्तरण गर्र्ने इच्छा जागेको उनले बताए ।
‘भोलिपल्ट ११ः३० बजे। साँल्दाइ परको फाँटमा बेस्मारी दगुरिरहेका थिए। बेलाबेला हावामा खाग नचाउँथे। पिसाब फेर्न टुसुक्क उभिएको थिएँ, सजग भएँ। साँल्दाइ जंगल पसे। म पनि दगुरेँ।
उनी, अगाडिका ठुल्ठुला रूखलाई टाउकैले ढालिदिउँलाझैं फ्वाँ–फ्वाँ दगुर्दै घरतिर सोझिए। मैले पछ्याएँ।
खिखिखि, के भयो साँइलालाई, गैंैडु? मीत बाको आवाज आयो। उनी पनि हतारिँदै रूखका हाँगाहाँगामा हाम फाल्दै आइरहेका रैछन्। थाहा छैन, मीतबा,ु मैले भनेँ, ठूलै संकट आइलागेजस्तो छ ।
मितबाले बेस्मारी अर्काे रूखको हाँगामा हाम फाले। हामी पुग्दा साँल्दाइ पाका अगाडि थरथर काँप्दै उभिएका थिए। गर्धनमा चाख्लो–चाख्लो साङ्लोजस्तो केही बाँधिएको थियो। के भो साइँला? पाले सोध्नुभो, अहम् पापीहरूले तेरो पनि खाग निकाल्न खोजे कि?
थाहा छैन, साँल्दाइले रुन्चे स्वरमा भने, पहिला चारपाँच वटा हात्तीले घेरे। हात्तीमाथि सयौं मान्छे थिए। पछि गर्धननेर च्यास्स भयो। होस आउँदा म एक्लै थिएँ। गर्दनमा भने यस्तो यन्त्र बाँधिएको रैछ ।
कथा गैडा टाइम्समा पशु र मानवको चरित्रलाई कलात्मक र भानात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । कथाको प्रस्तुत हरफ नाटकका परिकल्पनाकार दाहाललाई मन छोएको र मन परेको मद्येको एक हरफ हो ।
यस्ता थुप्रै हरफले उनमा कथालाई नाटक बनाउँनै पर्ने उर्जा थपेको छ । त्यसैले पनि उनी यो पटकको नाटकलाई थप कलात्मक बनाउन तल्लनी देखीएका छन् ।
र अन्त्यमा उनले अन्तराष्ट्रिय नाटक महोत्सव २०१९ नेपालबाट छनौट परेका १२ नाटक मद्ये गैडा टाईम्स पनि परेको सुखद समाचार सुनाएका छन् ।
नाटकमा सागर खाती, सुमित्रा पेहिम, आस्था निरौला, मौषम राना, पासाङ चोमु शेर्पा खुसी, बिकास राना, किरण भेट्वाल, बिदेश लामिछाने, दिपक खरेल,सुवास खरेल, प्रविण मगर, याङसाङ मुकारुङको अभियन रहने छ । नाटकमा प्रयोग हुने लाईभ म्यूजिकमा सुजन भण्डारी याङसाङ मुकारुङ र दिवेश लामिछानेले गर्नेछन् भने नाटकमा प्रस्तुत हुने गीत संयोग गुराईले रचेका हुन ।